Nala Xiriir - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Hel La-talin Khabiir ah si aad u sahamiso qorshooyinka
Khubaradeenna caafimaadka ayaa diyaar u ah inay kula kulmaan kilinikada deegaankaaga ama goob kale oo ku habboon si ay ugala hadlaan qorshahaaga hadda una sahamiyaan xulashooyinkaaga caymis.
KULAN KHIBRAD GUDAHA WACAQARIIR
Ma haysaa su'aalo ama waxaad dooneysaa inaad la hadasho wakiil?
Daboolida Shuruudahaaga, Taageerida Waqtigaaga
Kooxdayada maxaliga ah ee adeega macaamiisha saaxiibtinimo ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan. Waxay kajawaabi karaan su'aalo kasta oo aad kaheli karto caymiska, waxtarrada qorshaha, isqorista, ama helitaanka daryeelka.
Haddii aad u baahan tahay hoy ama qalab gaar ah oo qaab kale ah, fadlan nala soo xiriir annaguna waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino dukumiintiyadayada qaab kuu shaqeeya.
Dhagsii si aad uhesho lambarka hoose ee sida ugu fiican u sharaxaya nooca dalabkaaga.
Xubnaha Caafimaadka ee Hadda
Adeegga Macaamiisha waxaa la heli karaa toddobo maalmood usbuucii, laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 pm
Phone: 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 7-1-1)
Mail: Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington
1111 Wadada 3aad, Ste 400, Seattle, WA 98101
Fax: Faks ugu dir foomam kasta ama codsi qoraal ah (206) 652-7050
Xubnaha Caafimaadka ee mustaqbalka
Kooxdayada iibka iyo diiwaangelinta waxaa la heli karaa toddobo maalmood usbuucii, laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 fiidnimo Kala hadal khabiir ku takhasusay Medicare wixii su'aalo ah ee aad qabto.
Phone: 1-800-944-1247 (TTY Relay: Garaac 7-1-1)
Khubaradeenna caafimaad ee shatiga lihi waxay kaa caawin karaan diiwaangelinta, ka wada hadalka qorshahaaga hadda jira, sahamiyaan xulashooyinkaaga qorshe, iyo inay ka hadlaan waxaad uga baahan tahay caymiskaaga.
HELO KHABIIRNIMO KUUGU Dhow KHATAR Khubaro
Bixiyeyaasha Caafimaadka ee Hadda
U wac Caawinta Luqadda
Waxaan ku bixinaa adeegyo luqadeed luqado kala duwan bilaash ah.
Tan waxaa ku jira tarjumaadaha qalabka qoraalka iyo adeegga macmiilka oo lagu turjumay taleefan.
Ka hel taageero luqaddaada.
Nambarada Dhibaatooyinka Caafimaadka Maskaxda
Xiriirinta dhibaatooyinka ayaa la heli karaa 24/7. Haddii aad dhibaataysan tahay oo aad u baahan tahay caawimaad, wac khadka caawimaadda dhibaatooyinka.
Halkan guji si aad u aragto lambarrada taleefannada qalalaasaha ee gobolka Washington.
Xafiisyadayada Gobol ee Washington
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington wuxuu leeyahay shan xafiis oo ku yaal daafaha gobolka Washington.
Na soo wac at 1-800-944-1247 (TTY Relay: Garaac 7-1-1) si aad wax dheeraad ah uga ogaato goobaha iyo saacadaha xafiiska.
Ka Warbixi Arrin Bixi
Waxaan rajeynaynaa inaad hesho macluumaadka aad u baahan tahay. Nala soo socodsii haddii aad khaladaad kala kulanto degelkeenna waxaanan ku dadaali doonnaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan u xallinno. Wixii warbixin ah ee hoos ku soo sheeg.
Ma Shaqo Doonaysaa?
Waxbadan ka baro hadafkeena si aan u siino daryeel tayo leh qofkasta oo bulshada ka mid ah. Raadi shaqooyin furan.
BOOJO BOOQADO FURAN
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Oktoobar 22, 2019